September 23, 2021 ko ko 0
အပိုင်း ၈၇ အစအဆုံးဝမ်တုံက ” ယုဟောက်..ငါတို့ပထမပွဲမှာတင်..အားအကုန်သုံးလိုက်တာ ငါတို့ရဲ့ ခွန်းအားတွေကို ထုတ်ပြလိုက်သလိုမဖြစ်သွားဘူးလား? ယုဟောက်က ” ဒ်လိုကြည့်ပြီး ပြောလို့မရဘူး၊ ဒီပြဲက ငါတို့အတွက် အရှုံးထွက်ပွဲလဲဖစ်သလို အရမ်အရေးပါတဲ့ပွဲလဲဖြစ်တယ်။ ငါတို့က ရှီလာခေ့ကျောင်းရဲ့ ကိုယ်စားပြုဆိုတော့ သူတို့တွေ ကျတော်လို လူငယ္က ဘယ်လောက်ထိ လုပ်နိုင်စွမ်းရှိလဲဆိုတာ သိချင်နေတယ်။ […]
အပိုင်း ၈၆ အစအဆုံးယုဟောက်ရဲ့ အနီကွင်း ၆ ခုထဲကေန တစ္ခုက မြင့်တက်လာတဲ့အချိန်မှာ…ထင်လင်းကျောင်းက ကျောင်းသားတွေ အကုန်လုံး..အော်ညည်းလိုက်ကြတယ်။ ဒီဝိဉာဉ်ကွင်းကို ဒိုင်လူကြီးတောင် လန့်သွားတာဆိုတော့..ကျောင်းသားတွေဆိုရင် မပြောနဲ့တော့။ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အော်ရာကြောင့် သူတို့တွေ နောက်ဆုတ်သွားပြီး..တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကပ်နေကြတယ်။ ထိုအချိန်မှာပဲ..ယုဟောက်က သူ့ရဲ့ စိတ်ဝိဉာဉ်နှောင့်ယှက်ခြင်းကို သုံးလိုက်တယ်။ ထင်လင်းကျောင်းသားတွေက စိတ်ချောက်ချာသွားပြီး…ယုဟောက်ရဲ့ အေနာက္ကေန.. […]
August 29, 2021 ko ko 0
အပိုင်း ၈၄ အစအဆုံးယုဟောက်တို့ ၇ ယောက် ထွက်သွားပြီးချိန်မှာ ဆရာဝမ်ရန် တံခါးပိတ်လိုက်ပြီး..အသက်ပြင်းချလိုက်တယ်။ တိုက်ယွဲ့ဟန်က ” ဆရာဝမ်..သူတို့ကို ဒီလိုမျိုးနှစ်သိမ့် ပြောလိုက်တာ အဆင်ပြေပါ့မလား? ဆရာပြောတာ မမှားပေမယ့် အခုပြိုင်ပွဲဝင်ကြတဲ့ကျောင်းသားတွေအားလုံးက..သူတို့အသက်ရွယ်မှာ ပါရမီရှိကြတဲ့သူတွေ ကြီးပဲ။ နောက်ပြီး မနက်ဖြန်က ရှုံးထွက်ပြိုင်ပွဲဆိုတော့..သူတို့တွေ အစွမ်းကုန် တိုက်ခိုက်ကြမှာတော့ အမှန်ပဲ။ […]
အပိုင်း ၇၅ အစအဆုံးဒီလိုနဲ့ အသားပကင်ငါးကင်တေ့ကို နေ့လယ်စာအဖြစ်စားလိုက်ကြတယ်။ ၂ နာရီလောက်ပဲ အနားယူဖို့ ခန့်မှန်းပေမယ့်..၃ နာရီကြာသွာတယ်။ ” ယုဟောက်…ဒီတစ်ခါမင်းကို ငါသယ်သွားပေးမယ်…ငါ တိုက်ယွဲ့ဟန်လောက်မနှေးစေရဘူးလို့..ငါအာမခံတယ်” ဆိုပြီး..ယော့ဟောင်ရွှင်ပြောလိုက်တယ်။ ချန်စီဖုန်က ” မင်းငါတို့လို..တိုက်ခိုက်ရေးဝိဥာဉ်မာစတားကိုလိုက်နိုင်လို့လား?..ညီလေး ယုဟောက်..အကိုချန်နဲ့လိုက်ရင်..မင်းမမှားဘူး။ အနာဂတ်မှာ..မင်းရဲ့ဟင်းခတ်မွှေးကြေိုင်တွေအတွက် အကိုတာဝန်ယူတယ်”။ ” ရေခဲက ရေခဲနဲ့ပဲတည့်တယ်…၊ နင်ကို […]
အပိုင်း ၈၅ အစအဆုံးမနက် ၉ နာရီအချိန်မှာ ” အားလုံး တိတ်တိတ်နေကြ”. .ထိုအသံကို ကြားတော့..စစ်သည်တွေက သူတို့ရဲ့လှံတံကို မြောက်တင်လိုက်တယ်။ ” မင်းကြီး ရောက်ရှိလာပါပြီး၊ စစ်သားတွေ အားလုံးဒူးထောက်ကြတယ်။ ပြိုင်ပွဲကျောင်းသားတွေက ဒူးထောက်စရာမလိုပဲ..ဦးညွတ်ပေးရတယ်။ ” အားလုံး မတ်တပ်ရပ်ကြပါ…” ဘုရင်ကြီးပြောလိုက်တယ်။ ဝိဥာဉ်လက်နင်သံချဲ့နဲ့ ပြောလိုက်တဲ့အတွက် […]
ဖတ်မရသူတေအောက်အထိဆွဲကြည့်ပါ Soul land နိုဗယ်2အပိုင်း 83 အစအဆုံး
အပိုင်း ၈၃ အစအဆုံးအကြီးအကဲမူရဲ့စကားကြောင့် ကျောင်းအုပ်ရန် အံ့သြ သွားတယ်။ အကျောင်းအုပ်ရန်ရဲ့ ဝိဥာဉ်အဆင့်က ၉၅ ဆိုပေမယ့်…အကြီးအကဲမူသူ့ဆရာနဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် မိုးနဲ့မြေလိုပဲ၊ ဒါတောင် သူ့ဆရာရဲ့ အသက်ကိုတောင် ခြိမ်းခြောက်စေနိုင်တဲ့ ဝိဥာဉ်လက်နက်က ဘယ်လို ဝိဥာဉ်လက်နင်မျိုးလဲ? အကြီးအကဲမူက ” တကယ်လို့..နေလာအင်ပါယာသာ အင်းအားတောင့်လာရင်..သူတို့ အရိပ်မှာပဲ ပုန်းနေတော့မယ် ထင်လား?.. […]
ဖတ်မရသူတေအောက်အထိဆွဲကြည့်ပါ Soul land နိုဗယ်2အပိုင်း 82 အစအဆုံး
အပိုင်း ၈၂ အစအဆုံးအဆောင်ရှေ့မှာ…အမြဲနေနေတဲ့ ခြံစောင့်တစ်ယောက်လိုပုံစံ လူတစ်ယောက်က ဒီ ရှီလာခေ့ကျောင်းရဲ့ အကြီးဆုံးသူ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ။ အကြီးအကဲမုနဲ့ အကြီးအကဲရွှန်တို့က အသက် ၁၀ နှစ်ပဲကွာတယ်။ အကြီးအကဲမုက” မင်းလိုအသက် ၂၀၀ ကျော်လူအိုကြီးက ဘာလို့ စိတ်မရှည်ရတာလဲ? အမှားလုပ်မိတိုင်း ထွက်သွားရမယ်ဆိုရင်..ငါတို့ကျောင်းက အပိတ်ခံရတာကြာပြီး။ ရှီလာခေ့စောင့်ရှာက်သူရဲ့ ဒုခေါင်းဆောင်နေရာမှာ […]
ဖတ်မရသူတေအောက်အထိဆွဲကြည့်ပါ Soul land နိုဗယ်2အပိုင်း 81 အစအဆုံး
အပိုင်း ၈၁ အစအဆုံးဝမ်တုံက ” ယုဟောက် မင်းငါကို သေအောင် ခြောက်လှန့်လိုက်တာပဲ၊ ငါထင်တာက မင်းက ဒီအလောင်းတွေနဲ့အတူတူဖြစ်သွားပြီးလားလို့”။ ယုဟောက်က ” ငါ အဆင်ပြေပါတယ်..သေချိန်မတန်တဲ့လူတွေက ဘယ်တော့မှ မသေဘူး”။ ဆရာဝမ်ရန် လျှောက်လာပြီး ” ယုဟောက်..မင်းဘာမှ မဖြစ်တာ ကောင်းတယ်၊ မင်းလဲ အနားယူလိုက်ပြီး..ငါတို့ […]
ဖတ်မရသူတေအောက်အထိဆွဲကြည့်ပါ Soul land နိုဗယ်2အပိုင်း 80 အစအဆုံး
အပိုင်း ၈၀ အစအဆုံး ဓါးပြခေါင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို အလောင်း ၁၂ ကောင် ဆွဲဖြဲလိုက်ချိန်မှာ..နားကျင်ပြီး အော်ထွက်လာတဲ့အသံက..မီတာ ၁၀၀ အထိပါကြားရတယ်။ သူ့ရဲ့ မကောင်းမှုတွေက..သူ့ကိုပဲ အသက်ရှုံးစေတယ်။ ဓါးပြခေါင်းဆောင်သေ သွားတော့..အလောင်းတွေက လဲကျသွားပြီး..သူတို့ရဲ့ဦးခေါင်းကနေ..အဖြူရောင် ဝိဥာဉ်တွေထွက်လာတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဝိဥာဉ်တွေကို သန့်စင်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာ…ဝိဥာဉ်တွေ ပျောက်ကွယ်သွားပြီ…အလောင်းမှာ အရိုးတွေပဲ ကျန်တယ်။ ” […]
ဖတ်မရသူတေအောက်အထိဆွဲကြည့်ပါ Soul land နိုဗယ်2အပိုင်း 79 အစအဆုံး
အပိုင်း ၇၉ အစအဆုံးအကြီးအကဲ ရွှန် သတိထားပါ ” ယုဟောက် သတိပေးလိုက်တယ်။ အကြီးအကဲ ရွှန်က အဖြူရောင်လင်းတန်ဘေလုံးတစ်ခုကို ယော့ဟောက်ရွှင်ရဲ့ အလောင်းမှာ ပစ်ထည့်လိုက်ပြီး..ကျန်တဲ့လက်တစ်ဖက်နဲ့ ထို မိစ္ဆာဝိဥာဉ်ဘုရင်ကို.. လင်းတန်တွေနဲ့ပစ်လိုက်တယ်။ ထိုအချိန်မှာပဲ..ထူးလြားမှု တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ ထိုရန်သူကေန ဝိဥာဉ်ကွင်းတွေ ပျောက်သွားပြီး..မြူငွေ့အဖြစ်သို့ပြောင်းသွားကာ…သူထွက်မပြေးပဲ..ယုဟောက်ဆီကို တိုးဝင်လာတယ်။ လျင်မြန်တဲ့အတွက်..ယုဟောက်က သူ့ရဲ့ […]